Ny fanekena tarehy Android dia avy amin'ny tanan'ny Qualcomm | Androidsis
Andro vitsy lasa izay dia natolotr'i Apple ny iPhone vaovao misy azy, miaraka amin'ny iPhone X ho toy ny sainam-pirenen'ny mpamokatra monina Cupertino. Fantsona miavaka indrindra ho an'ny Face ID, ny rafitra fanekena tarehy izay tonga hanolo ny Touch ID, ny rafitry ny dian-tanan'i Apple.
Tsy vao sambany mahita rafitra toa an'io isika, ary tsy mandeha lavitra intsony Samsung dia efa manana rafitra famantarana ny tarehy amin'ny telefaona sasany na dia tsy diso aza, ny asany dia lavitra ny fanoloana ny dian-tanan-tànana. Io no idirany Qualcomm, izay miasa irery Famantarana ny tarehy Android.
Qualcomm dia miasa ka ny mpikirakira Snapdragon 845 dia manana teknolojia fankasitrahana Android 3D tarehy
Toa tsy mila miandry ela ny mpampiasa Android vao mankafy teknolojia mitovy amin'ny an'ny Face ID. Ny mpanamboatra processeur voalohany ho an'ny finday dia te-hahita vahaolana ary noho izany dia niombon-kery tamin'ny orinasa izy Himax, manam-pahaizana manokana amin'ity haitao ity, hitondra fanekena tarehy ny fitaovana Android.
Araka ny tatitra naely, ny Fanekena endrika 3D, izay miasa amin'ny alàlan'ny teknolojia antsoina hoe SLiM (Structure Light Module), dia ho avo lenta ka afaka manolo ny mpamaky ny rantsantanana.
Ny zavatra tsara indrindra dia ny Teknolojia SLiM Izy io dia manana fanjifana angovo farafahakeliny ka mifanaraka amin'ny fitaovana rehetra. Tsy fantatsika hoe iza no terminal voalohany hampiasana ity teknolojia ity, fa ny mazava dia mijanona eto ny rafitra famantarana ny tarehy.
Ary tsy ho ela intsony vao hahita ny voalohany Telefaona Android miaraka amin'ny rafitra fanekena endrika avy amin'ny Qualcomm. Mazava ho azy fa ao amin'ny andiany manaraka an'ny Mobile World Congress dia hanana lisitra finday lava Android misy rafi-pamantarana ny tarehy isika, ny zavatra tsy maintsy ho hita dia raha tena manolo ilay mpamaky ny rantsan-tànana izy io.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » About us » Ny fanekena tarehy Android dia avy amin'ny tanan'ny Qualcomm
Into the Dead 2 dia efa azo alahatra mialoha ao amin'ny Google Play